Esemokwu dị n'etiti di na nwunye gbasara ibi úgwù - Rabbi Michael Avraham
Esemokwu dị n'etiti di na nwunye gbasara ibi úgwù
Nzaghachi > Atiri: Izugbe > Esemokwu dị n'etiti di na nwunye gbasara ibi úgwù
Paini Ajụrụ ya afọ 2 gara aga
Ndewo Rabbi na ezumike obi ụtọ,
Ọ bụrụ na e sere na e nwere esemokwu n’etiti nne na nna abụọ gbasara ibi nwa ọhụrụ úgwù. N'ụzọ iwu kwadoro na / ma ọ bụ n'omume, a ga-ahapụ onye chọrọ ibi úgwù? Ka ekwesịrị ijide ọnọdụ ahụ ka nwa ahụ họrọ mgbe o tolitere?
mikyab Ndị ọrụ Zara afọ 2 gara aga
Ọ dabere n'ihe nkwekọrịta dị n'etiti di na nwunye site na mmalite (mgbe ha lụrụ). Ọ bụrụ na enweghị nkwenye doro anya na enweghị ike ịchọta ya n'ụlọ mkpọrọ (dịka omenala na-emekarị na gburugburu ebe obibi ha) wdg, mgbe ahụ, ọ dị m ka omume ọma kwesịrị ikwe ka nwa ọhụrụ họrọ mgbe o tolitere.
Chinese na akpali mmasị Zara 2 afọ gara aga
Omume sitere na iwu okpukpe mba?
Ma ọ bụrụ na e nwere esemokwu n'etiti okpukperechi na omume ebe a, ị ga-egosipụta echiche ókèala ma họrọ omume? (N'ezie, gịnị kpatara na ị gaghị eji ihe ndị a n'ozuzu kwupụta nwa? Dịka ọmụmaatụ na ebe iwu ma ọ bụ ọha mmadụ na-akwadoghị okwu)
mikyab Ndị ọrụ	Zara 2 afọ gara aga
Okpukpe n'ezie ọ bụghị. Na na ọjụjụ nke nne na-ewepụ ọrụ nna ya?
Aghọtaghị m ajụjụ gbasara ókèala. Gịnị bụ njikọ?